Uninzi Kangakanani NgoBats?
Amatshati anemiphumo embi: abaninzi abantu bayabonakalisa njengezimbi, ukuhlala ebusuku, izigulana ezindizayo ezikhupha izifo, kodwa ezi zilwanyana ziye zafumana impumelelo enkulu yokuziphendukela kwemvelo ngenxa yemimiselo yazo ekhethekileyo (kubandakanywa iminwe ehlanganisiweyo, amaphiko ekhumba kunye nokukwazi ukukhangela) . Kula ma-slides alandelayo, uza kufumana ama-10 ebalulekileyo amaqiniso, ukususela ekubeni ezi zilwanyana ziguquke njani ukuba zizalise kangakanani iziko.
Iibhothi Ngaba ziLwazi oluMzimba kuphela lweNqwelo lokuThuthuza
Ibhola elikhulu laseKapa. Wikimedia Commons
Ewe, ezinye ezinye izilwanyana-ezinjenge-squares kunye ne-squirrels ezindizayo-zikwazi ukujikeleza emoyeni emifutshane emifutshane, kodwa iilulwane kuphela ezikwazi ukunika amandla (oko kukuthi, i-wing-flapping). Nangona kunjalo, amaphiko amathamsane ahlelwe ngokwahlukileyo nakwezinye iintaka : ngelixa iintaka ziphosa zonke iingalo zamabhokhwe zibaleka, iilwane ziphosa kuphela isahlulo seengalo zawo ezihlanganiswe ngeminwe yazo evuliwe, echazwe ngeenkontsho ezincinci zesikhumba. Iindaba ezilungileyo kukuba le nto inika iilwane ziguquguquke kakhulu emoyeni; Iindaba ezimbi kukuba amathambo abo amade, amancinci amancinci kunye nesikhumba esikhanyayo angakhange aphulwe okanye ahlulwe.
Kukho iiNdidi ezimbini ezibalulekileyo zeBats
I-megabat eqhelekileyo. Wikimedia Commons
Iintlobo ezingaphezu kwe-1 000 zamaduna emhlabeni jikelele zahlulwe zibe ziintsapho ezimbini, i-megabats kunye ne-microbats. Njengoko usenokuba uqikelele ukuba, i-megabats inkulu kunokuba i-microbats (ezinye iintlobo zifikelela ezimbini iipounds); ezi zilwanyana ezindizayo zihlala kuphela e-Afrika nase-Eurasia kwaye ziphela "zixhamla" okanye "zincinci," zithetha ukuba zidla kuphela iziqhamo okanye i-nectar yeentyantyambo. Amabhakethi awona amancinci, ahlambulukileyo, adla izilwanyana kunye nezilwanyana zokuphuza igazi apho abaninzi abantu bajwayelene nabo. (Ezinye izazi zendalo ziphikisana nale nto / okanye ukuhlukana, zibiza ukuba i-megabats kunye ne-microbats kufanele zihlelwe phantsi kwe-bat bathehlukeneyo "i-superfamilies.)
I-Microbats kuphela ine-Ikhono lokuXhobisa
I-bat ye-mouse e-wide. Wikimedia Commons
Xa ehamba, i-microbat ikhupha i-ultrasonic ingqungquthela ephakamileyo ekhupha izinto ezikufuphi; Ama-echos abuyelayo aqhutywe ngengqondo ye-bat ukudala ukuhlaziywa kwemilinganiselo emithathu yendawo engqongileyo. Nangona ziyaziwa kakhulu, iilwane azizona kuphela izilwanyana ezisetyenziselwa ukusebenzisa i-echolocation; le nkqubo ikwaqashwa ngamadonphin, porpoises kunye nemikhomo yokubulala; iincinci ezincinci kunye nezilwanyana ezincinane (ezincinci, ezinjengezilwanyana ezinjengezilwanyana eziseMadagascar); kunye neentsapho ezimbini zeebhu (inyaniso, ezinye iintlobo zeenundu zikhupha izandi eziphakamileyo ezivakalayo ezenza umonakalo weempawu ezinxilayo!)
Iimpawu zokugqibela ezichongiweyo zibheke zihlala iminyaka eyi-50 yezigidi
I-fossil i-Icaronycteris. Wikimedia Commons
Cishe yonke into esiyayaziyo malunga nokuziphendukela kwemvelo kuvela kwimigangatho emithathu eyayihlala malunga neminyaka eyi-50 yezigidi edlulileyo: i-Icaronycteris ne-Onychonycteris ukusuka kwi-Eocene yaseMntla yaseMntla yaseMelika, kunye nePalaeochiropteryx ukusuka entshonalanga yeYurophu. Okuthakazelisayo kukuba, eyona yokuqala yamatye, i-Onychonycteris, yayinokukwazi ukuhamba ngeenqwelo ezihamba ngamanzi kodwa ayikho i-echolocation, ebonisa ukuba yinto efanayo ne-Icaronycteris yangomhla; I-Paleaeochiropteryx, eyayiphila iminyaka eyi-miliyoni kamva, ibonakala ibenokukwazi ukuxhaswa kwamandulo. Ngexesha elide lase- Eocene , malunga neminyaka engama-40 yezigidi edlulileyo, umhlaba wawunezikhwebu ezinkulu, ezixhambileyo, ezinobungqina obunokuthiwa ngu-Necromantis.
Iintlobo ezininzi zeBat ziNtshonalanga
I-horseshoe bat. Wikimedia Commons
Icandelo lento eyenza abantu abaninzi bayamoyike iilwane kukuba ezi zizilwanyana ezilwanyana ziphila ngobusuku: ininzi yeentlobo zezilwanyana zihamba ebusuku, zilala emini eminqubeni emnyama (okanye ezinye iindawo zokuhlala, ezifana nemithi yemithi zezindlu zakudala). Ngokungafani nezinye izilwanyana ezizingela ebusuku, amehlo eentlanzi zihlala zincinci kwaye zibuthathaka, kuba zihamba ngokubanzi malunga ne- echolocation . Akukho mntu uyazi kakuhle ukuba kutheni iilwane zitshatyalaliswa ebusuku, kodwa kunokwenzeka ukuba le mpawu yaguquka ngenxa yokhuphiswano olunzulu ukusuka kwiintaka ezizingela iintsuku; Kwakhona akunakonakalisa ukuba izilwanyana ezixubene ebumnyameni azikwazi ukufunyanwa kalula ngabantu abakhulu.
Iibhakethi zinokuqulunqwa kweendlela zokuzalisa
Umtshini wePipistrelle osanda kuzalwa. Wikimedia Commons
Xa kuziwa ekuveleni, iilwane zixhalabele ngokusingqongileyo kwimimandla yendalo-emva kwayo yonke into, ayinakuyenza ekuzaleni iilitha ezipheleleyo ngexesha lexesha apho ukutya kunqongophala. Iibhinqa zezinye iintlobo zezilwanyana zinokugcina imbewu yesilisa emva kokuqhathaniswa, ke ukhethe ukutshiza amaqanda emva kweenyanga, ngexesha elihle kakhulu; kwezinye iindidi ze-bat, amaqanda ahlonywa ngokukhawuleza xa sele ekhulisana, kodwa amathumbu awaqala ukuhlakulela ngokuzeleyo aze aqhutywe yimpawu ezibonakalayo ezivela kwindawo. (Kule rekhodi, ii-microbats ezisandul 'ukuzalwa zifuna iintsuku ezisibhozo ezisibhozo zononophelo lwabazali, ngelixa amaninzi amaninzi adinga iinyanga ezine ezipheleleyo.)
Iinqununu ezininzi Ziyathwala izifo
I-virus yeerbbi. MyStorybook.com
Kwiindawo ezininzi, izilwanyana zinegama elingasifanelanga lokuba lihlazo, izibi, izilwanyana ezinobungozi. Kodwa umntu ogqityiweyo kumlenze ulungile kumqondiso: ezi zilwanyana "zithintelo zokuhambisa imitha" yazo zonke iintlobo zegciwane, ezilula ngokubanzi kwimimandla yazo esondeleyo kwaye zichazwe lula kwezinye izilwanyana ngaphakathi kwimizila yezilwanyana. Ininzi kakhulu apho abantu bakhathazekile khona, iilwane ziyaziwa zithwala izidlwengulo, kwaye ziye zabandakanyeka ekusasazeni kwe-SARS (i-severe stute respiratory syndrome) kunye ne-virus ye-Ebola eyingozi. Umgaqo omhle wesithupha: ukuba kwenzeka ntoni kwi-bat ephazamisekileyo, eyalimala okanye egulayo, ungayithinti!
Iintlobo zintathu zeBata eziZondla ngeGazi
Ikhanda lebhokisi levampire. Wikimedia Commons
Eyona ntsholongwane ebalulekileyo eyenziwa ngabantu kukugxeka zonke izilwanyana ngokuziphatha kwezilwanyana ezintathu ezithatha igazi: i-vampire bat (i- Desmodus rotundus ), i-vampire bat (i- Diphylla ecaudata ) kunye ne-white-winged vampire bat ( Diaemus young ). Kwezi zintathu, kuphela i-batampu ye-vampire ekhethekileyo yokukhetha ukutya kwenkomo kunye nexesha lomntu; Ezinye iintlobo ezimbini zeentlanzi ziza kuba zihlala kwiintaka ezihlwaya, ezifudumalayo. Iimpampu zintampu zintsimi kwintshona yeMntla yaseMntla Melika kunye neMzantsi Melika, eyinto engangqinekiyo, ngenxa yokuba ezi zilwanyana zixhamene neDracula yenkolelo eyavela ephakathi kweYurophu!
Amabhathi axhasiweyo kunye neCompederacy ngexesha leMfazwe yombutho
Inqwaba ye-guano. Walt's Organic
Eyona ndlela, intloko ingaba yinto engaphezulu-iilwimi, njengabanye izilwanyana, abafuni ukubandakanyeka kwezopolitiko zabantu. Kodwa inyaniso kukuba i-bat poop, eyaziwa nangokuthi i-guano, isisityebi kwi-nitrate ye potassium, eyayiyisisombululo esibalulekileyo kwisibhamu-kwaye xa i-Confederacy ifumene ifutshane ne-potassium nitrate ephakathi kweMfazwe yoLuntu, yayithumelela ukuvula iibhon guan mines kumazwe ahlukeneyo asezantsi. Omnye wam waseTexas wanikela ngaphezu kweetoni ezimbini ze-guano ngemini, elalibilisa ngamapounds e-nitassium nitrate; I-Union, isityebi kwishishini, mhlawumbi iyakwazi ukufumana i-nitrate yayo ye-potassium kwimithombo engeyiyo.
Eyokuqala Ngokuqala "Ibhin-Man" Yakhulekiswa Ama-Aztec
Unkulunkulu waseAztec uMiktlantecuhtli. Wikimedia Commons
Ukususela kuma-13 ukuya kwekhulu le-16 AD, i- Aztec impucuko yaseMexico yayinqula unqulo lwababantu, kuquka uMictlantecuhtli, unkulunkulu oyintloko wabafileyo. Njengoko kuboniswe umfanekiso wakhe kwisixeko sase-Aztec saseTenochtitlan, uMictlantecuhtli wayenobuso obunqambileyo, obunjenge-bat-sha kunye nezandla ezinyawo-ezifanelekileyo kuphela, ekubeni izilwanyana zakhe zazibandakanya izilwanyana, izigubungulu, izilwanyana kunye nezinye izidalwa ezinqabileyo ubusuku. Ngokuqinisekileyo, ngokungafani nomlingani wakhe we-DC Comics, uMictlantecuhtli akazange alwe nolwaphulo-mthetho, kwaye umntu akanakucinga ukuba igama lakhe libolekisa ngokulula ukutshatyalaliswa kwempahla!
12 Izilwanyana zezilwanyana kunye neNyaniso eSebenzayo
Imihla ecacileyo yoSuku lwe-Arafat ukususela ngo-2017 ukuya ku-2025
IThala le-Ashurbanipal - ii-2 600 zeMesopotamiya
I-Deifinition kunye neMvelaphi yeNotochord
Ukufunda Njani kunye Nokuba Nini